Amboo-Hiriira balaaleffannaa ABO baha jechuun shira OPDO’n qindeessite kan Magaalaa Ambootti qophaa’ee ture fashalaa’e! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAmboo-Hiriira balaaleffannaa ABO baha jechuun shira OPDO’n qindeessite kan Magaalaa Ambootti qophaa’ee ture fashalaa’e!
Amboo-Hiriira balaaleffannaa ABO baha jechuun shira OPDO’n qindeessite kan Magaalaa Ambootti qophaa’ee ture fashalaa’e!
Keenya lolaan Waaqa!!
OPDO will never get confidence as long as OLF lives in the hearts and minds of the Oromo people.( The OPDO never changes, only their name)
Shira/Shiftaa OPDO/ODP’n Akkasi ta’i?
Qeerroon Amboo yeroo hunda mahandisa qabsoo Oromooti, waa malee kana hin jenne, guyyaa har’aa OPDO’n kosiin hiriira balaaleeffannaa ABO/WBO waamte irratti qeerroon Amboo hiriiricha gara mormii Opdotti jijjiiruun geggeessaa oolan! Kun qeerroowwan keenya kutaalee Oromiyaa mara keessa jiraniif barnoota guddaadha.
Qeerroon Amboo sirna abbaa irree EPRDF fi shira isheen WBO irratti xaxxu balaaleffataa jiru.
Karaanis cufameera. Poolisoonni hiriirtotarratti dhukaasa banee jira.
Namni Baduuf ka’e Nama galaafata kan jedhamuuf dhagahuurra tarree Argaa jirra.
Mootummaan biyya bulchu akkuma argaa jirru oromiyaa bakkoota garaagaraatti ABO shanee jecha jedhuun ummata dirqamaan irra deemee mallatteessisiisee hiriira bahaatii balaaleffadhaa jechaa akka jiru dhagahaas argaas jirra.
Kun kufaatii isaa argisiisa sababni isaas Addunyaa jiraannu keessatti ummatatu fedhiitiin ykn roorroo jibbaaf yeroon inni bahee gochaa sana balaaleffatu malee dirqamaan mootummaan hiriira bahaa ana malee jiraachuun fafa kan jedhu biyyuma keessa jiraannutti argaa jirra.
Yoo hin baane ni hidhamte ,hojiirraa ariyamta ,manni daldalaa kee ni cufama jechuun ummata irra deemanii mallatteessisiisanii dirqamaan RIB milishaa waliin tahuun hiriira baasaa jiraachuu arguu irra geenyeerra.
Kuni homaa miti lafa barii dukkanni ni hammaataa Jedhama mitiiree.
Oduun gara Godina Horroo Guduruu aanaa Guduruu irraa as qaarite tokko hedduu na ajaa’ibe jennaan ummatni akka dhagahun dirqame.
Guyyaa boruu jechuun Adoolessa 8/2019 milishaan aanaa Guduruu RIB waliin tahuun Maatii Ajajaa WBO zoonii lixaa #jaal #Marroo kan tahan Obbo #Dirribaa_Lammeessaa fi Haadha warraa isaanii akkasumas mucaa isaanii mana jiru guyyaa boruu dhaadannoo qabattanii baatanii jaal Marroon haa ajjeefamu jettu jechuun doorsisaa jiru.
Maatiin jaal Marroo guyyaa boruu hiriira bahee Marroon haa du’u jedhee dhaadannoo qabatanii yoo hiriira dura deemtanii hin balaaleffanne mana keessan ni gubna isiniinis ni ajjeefna jechuun doorsisaa akka jiran maatiin kun dubbatus jiru.
Sababa mucaan isaanii ajajaa WBO taheef qofa maatiin kun yeroo hedduu doorsifnii fi reebichi akka irra taha jiru obbo Dirribaa lammeessaa abbaan jaal #Marroo VOAf Tsahay Daamxoo waliin guyyoota muraasa dura gaaffiif deebii godheen dubbatee ture.
Amma immoo oduun Adoolessa 7/2019 maatii kana irraa nu dhaqqabe akka mirkaneessutti manni koo milishaa fi RIB marfamee eegamaa Jira guyyaa har’aa akka ani hin sochooneef jedhu obbo Dirribaa Lammeessaan.
Akka obbo #Dirribaa Lammeessaa jedhanitti anaa fi mucaa koo na bira jiru eegaa jiru dirqama boru hiriira baatanii mucaa keessan akka inni du’uuf hin balaaleffattan yoo tahe isintu du’a nuun jechaa jiru jedhu. Akkuma “Harree sodaattee Dibdaabaa Reebdi “jedhan jaal Marroo bosona jiru dadhabdee maatii mana taa’ee jireenya dhuunfaa isaa jiraatu dararuun jaal #Marroo ajjeesuu ykn balaaleffachuun tahu. Qabsoon qabsaa’ota Haqaan bakka ni gaha.
Tokko qabsoo wareegamu kudhantu qabsootti gala, kudhan du’us kumaatamatu qabsootti makama waan taheef dhaabbadhaa of ilaalaa jedhaan. Midiyaaleen Oromoo bakka jirtanii gochaa maatii kana irra taha jiru yoo oromummaan isinitti dhagahame lafeen awwaalcha dhabee fi dhiigni Aspaaltii gubbaarra lola’e yoo isinitti kan dhagahamu tahe maatii kana iyyaafadhaa gabaasaa Addunyaaf . Sanaan ala isini warruma dhiigni oromoo dhangalaasuun gargar miti.
Unilateral declaration of the State of Sidaamaa.